Real Madrid Oo Qaadday Tallaabadii Ugu Dambaysay Ee Ay Ku Joojinayso Lucas Vazquez Oo Bilaash Ku Baxaya - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid Oo Qaadday Tallaabadii Ugu Dambaysay Ee Ay Ku Joojinayso Lucas Vazquez Oo Bilaash Ku Baxaya
Real Madrid Oo Qaadday Tallaabadii Ugu Dambaysay Ee Ay Ku Joojinayso Lucas Vazquez Oo Bilaash Ku Baxaya
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qaaday tallaabadii ugu dambaysay ee u suurtogelin karaysa in ay sii haysato laacibka reer Spain ee Lucas Vazquez, waxaanay u bandhigtay qandaraas ay horumar ku samaysay oo ay doonayso in ay kaga joojiyaan in uu ka tago Santiago Bernabeu dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Laacibkan boosaska badan ka ciyaara ayaa tiir muhiim ah u ahaa Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan, waxaanu uga ciyaaray dhawr meelood oo kala duwan, laakiin booska loogu baahida badnaa ee uu buuxiyey ayaa ahaa difaaca midig ee uu dhaawac kaga maqnaa Dani Carvajal.
Heshiiska Lucas Vazquez uu kula jiro Real Madrid ayaa ku eg June 30, waxaanay wararku sheegayaan in qorshihiisu yahay in uu iskaga tago Valdebebas marka uu xilli ciyaareedku soo dhamaado, iyadoo ay kooxo badan oo ay ugu horreyso Bayern Munich ay xiisaynayaan.
Laakiin hadda ayay soo baxday fursad kusii hayn karta Real Madrid maadaama kooxdu isbeddel ku samaysay qandaraaska ay doonayso in uu u saxeexo, kaas oo lacag ahaan iyo tirada sannadahaba la kordhiyey.
Los Blancos ayay ka go’an tahay in Lucas ay ku abaal-mariso bandhiggii cajiibka ahaa ee uu sameeyey xilli ciyaareedkan, iyagoo ogsoon in kooxdu ay u baahan tahay in ay sii haysato oo uu uga ciyaari karayo hadba meesha looga baahan yahay.
Kooxda ayaa la rumaysan yahay, in xilli ciyaareedka dambe ay mudnaanta siinayso Dani Carvajal iyo Alvaro Odriozola oo difaaca midig ah, laakiin Dani ayay dhaawacyo daashadeen xilli ciyaareedkan, kuna soo bilowday 15 kulan oo kaliya ayaa taam ahaanshihii iyo kalsooni badnayd ee lagu qabay caafimaadkiisu ay hoos u dhacday, sidoo kalena Zidane ayaa u arka Odriozola in aanu wali gaadhsiisnayn heerka tayada uu ka doonayo ciyaartoyda uu kusoo bilaabayo.
Taasi waxay fursad fiican u tahay Lucas Vazquez oo haysta kalsoonida tababarihiisa, laakiin hadda go’aanku isaga ayuu gacanta ugu jiraa, waxaanay arrintu ku dhamaan doontaa sida uu isagu doonayo.